इस्लामावाद । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले जम्मू–कश्मीरलाई दिइएको विशेषाधिकार खारेज भएपश्चात पुलवामामा भएजस्तो आक्रमण पुनः हुनसक्ने आशंका प्रकट गरेको छ । यदी त्यस्तो भए भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध भड्किन सक्ने उनले चिन्ता प्रकट गरे ।
पाकिस्तानी संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री खानले भने, ‘यो यस्तो युद्ध हुनेछ जहाँ कसैले जित्ने छैन र यसको असर पुरै विश्वमा पर्नेछ ।’
पाकिस्तानी संसदको संयुक्त बैठक जम्मू–कश्मीरको विशेषाधिकार सुनिश्चित गरिएको भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने भारत सरकारको निर्णयबारे छलफल गर्न बोलाइएको थियो । भारत जम्मू–कश्मीरलाई आफ्नो अखण्ड हिस्सा ठान्छ जसमा पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीर पनि पर्दछ ।
प्रधानमन्त्री खानले परमाणु हतियारद्वारा सुसज्जित दुई देशबीचको तनावले युद्धको स्थिती निम्त्याउन सक्ने प्रष्ट पारे । भारत सरकारको पछिल्लो निर्णयको कश्मीरी जनताले विरोध गर्ने र भारत सरकारले उनीहरू कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्री खानको चिन्ता थियो ।
‘यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा फेरि एक पटक पुलवामाजस्तो आक्रमण हुनसक्छ । मैले आशंका प्रकट गरिसकेँ कि यस्तो हुन्छ । त्यसपछि उनीहरूले हामीमाथि हमला गर्नेछ । हामी त्यसको जवाफ दिनेछौँ’, प्रधानमन्त्री खानले भने ।
संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री खानले भने, ‘त्यसपछि के हुन्छ ? युद्ध कस्ले जित्ला ? कसैले जित्दैन । सारा विश्वले यसको गम्भीर नतिजा भोग्नुपर्नेछ । परमाणु हतियारलाई लिएर ब्ल्याकमेल गर्ने कुरा होइन ।’
उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कश्मीरको स्थितीलाई गम्भीरताका साथ लिन अनुरोध गरे । उनले विश्व राजनीतिका नेताहरूलाई यसबारे अवगत गराइने बताए ।
यस मुद्दालाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद् सहित विश्वका प्रत्येक मञ्चमा लड्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छ । यो मुद्दालाई उनले अन्तर्राष्ट्रि न्यायिक अदालतमा लैजाने सोचिरहेको समेत बताए ।
सन् १८४७ देखि २०१९ सम्ममा जम्मु कश्मीरमा के के भयो ?